Injini yoSuthu isiwubheke ngabomvu oweMazembe yodumo kwiCaf
UKEAGAN Buchanan waMaZulu FC ubona ukudlala neTP Mazembe kuzobakhombisa ubunjalo bokudlala kwiCaf Champions League Isithombe: BACKPAGEPIX
UMDLALI waMaZulu FC ofike wazakhela ugazi uKeagan Buchanan, ukholwa ukuthi umdlalo wabo ne-TP Mazembe yaseDemocratic Republic of Congo (DRC) yiwona ozobazwisa ukuthi kuyini ukudlala kwiCaf Champions League.
Usuthu luzokwamukela iMazembe ebalwa namanye amaqembu ahlonishwayo kuleli zwekazi okufakazelwa wukudla kwayo isicoco seChampions League amahlandla ayisihlanu.
Lo mdlalo womlenze wokuqala esigabeni sesibili kweyokuhlungela ukungena kweyamaqoqo eChampions League uzoba ngoLwesihlanu ngo-5 ntambama, eMoses Mabhida Stadium.
UBuchanan obeyingxenye yamabutho kaBenni McCarthy atabalase aze anqoba ekugcineni kwiNyasa Big Bullets yaseMalawi kweyemilenze emibili esigabeni sokuqala, ukholwa ukuthi yima bezoqala bezwe ukuthi kusuke kukhulunywa ngani uma kukhulunywa ngeChampions League.
“Sesikudlulisile okwenzeke emdlalweni odlule nendaba yephenathi ngoba siyaqonda ukuthi izinto ezifana nalezi ziyenzeka kunobhutshuzwayo,” kusho yena ethimbeni labezindaba loSuthu izolo ekuseni.
Ngokwalo mdlali ofike Osuthwini esuka kwiMaritzburg United eyayimthole kwiKaizer Chiefs, yena nozakwabo abasakwazi ukulinda ukuthi kufike usuku lomdlalo.
“Imimoya iphezulu ngendlela ekahle kuwona wonke umuntu ngoba umdlalo olandelayo sibhekene kuwona neqembu elikhulu e-Afrika.
“Imidlalo efana nalo esiya kuwona yiyo kanye ophupha ngayo uma ucabanga ngeChampions League. Ukubhekana namaqembu abalwa namakhulu e-Afrika iyona kanye into esiyizele kulo mqhudelwano ngokho-ke wonke umuntu uma ngezinyawo ekhempini kulindwe usuku lomdlalo.
“Akukho okutheni okubhekwe kithina kulo mdlalo uma kuzoyiwa ngokwesipiliyoni seChampions League. Yingakho siya kuwona singenavalo futhi singenayo ngisho nencane ingcindezi.
“Esingakwenza ukuzimisela kakhulu kunakuqala ukuqinisekisa ukuthi siyawunqoba umdlalo wasekhaya,” kusho lo mdlali.
UBuchanan oke wadlala nakwiBloemfontein Celtic, uthe okwenzeke koweBig Bullets ibashayela ekhaya kowomlenze wokuqala kubavule amehlo ngengcuphe ehambisana namaphutha afana nalawo.
“Esikufundile ubumqoka bokunqoba imidlalo yasekhaya ngoba sibonile ukuthi kunzima kanjani uma usumelwe umqansa wokuwina ekuhambeni.
“Zonke izinhlelo zihamba kahle. Ngisho sesibuyela kweyeligi sizobe siphumule kahle silunge ngokwanele ukuqhubeka ngomgqigqo ofanayo nakwiDStv Premiership,” kuphetha uBuchanan.